လမ်းကြေးတွေ တကယ်လျော့ချတော့မှာလား | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanma News » လမ်းကြေးတွေ တကယ်လျော့ချတော့မှာလား
Posted by piti on May 13, 2011 in Myanma News, News | 14 comments
ပြည်ပအသံလွှင့်ဌာနတွေဖြစ်တဲ့ BBC, VOA, RFA လို အသံလွှင့်ဌာနတွေက မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကုန်ဈေးနှုန်းကြီးမြင့်ရတာဟာ လမ်းအသုံးပြုခကောက်ခံတဲ့နှုန်းထား ကြီးမြင့်တာကြောင့်လို့ ဆိုကြ၊ ပြောကြလွန်းလို့ထင်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရသစ် ပြည်သူလူထုတွေအတွက် အဆင်ပြေစေဖို့ ရည်ရွယ်ချက် ကြီးကြီးမားမားထားလို့ လမ်းအသုံးပြုခကောက်ခံတဲ့ဈေးနှုန်းတွေ လျော့ချဖို့ စီစဉ်နေတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီး၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဟာ လမ်းအသုံးပြုခကောက်ခံခွင့် လေလံအောင်ထားတာ ၁ လကျော်ကျော်သာ ရှိသေးတဲ့ ကုမ္ပဏီတွေ၊ အဖွဲ့အစည်းတွေ၊ ကန်ထရိုက်တွေကို နေပြည်တော်ကို ဆင့်ခေါ်ပြီး အစည်းအဝေးတစ်ခု မေလ (၁၂) ရက်နေ့က ဝန်ကြီးဌာနအဆောက်အဦမှာ ပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ လမ်းကြေးအသုံးပြုခကောက်ခံခွင့်ရထားတဲ့ သူတွေဆီက သိရပါတယ်။
ဝန်ကြီးဟာ ကုန်ဈေးနှုန်းကျဆင်းစေဖို့ရည်ရွယ်ပြီး လမ်းအသုံးပြုခတွေကို လက်ရှိကောက်ခံနေတဲ့ နှုန်းထားကနေ အတော်လျော့ချထားတဲ့နှုန်းထားနဲ့ကောက်ခံဖို့ ညွှန်ကြားခဲ့ပါတယ်။ တစ်မိုင်ကို ပြားခြောက်ဆယ် နှုန်းနဲ့ ကောက်ခံဖို့ညွှန်ကြားခဲ့ပါတယ်တဲ့။ နှုန်းထားအသစ်ကို ကြားလိုက်ရတဲ့ ကန်ထရိုက်တွေဟာ တီဆားနဲ့တို့ခံရသလို တွန့်ကုန်ကြပါတယ်။ ဟုတ်တယ်လေ သူတို့ ဒီလိုကောက်ခံခွင့် လေလံအောင်ဖို့ ကုန်ကျထားတဲ့စရိတ်တွေက နည်းမှ မနည်ပဲ။ လမ်းအပိုင်းအလိုက် ကောက်ခံခွင့်ရဖို့ ပေးရတဲ့လေလံကြေးကလည်း အနည်းဆုံး သိန်း (၅၀၀) ဝန်းကျင်ကနေ သိန်းထောင်ကျော်ထိ ပေးခဲ့ရတာပါ။ အစိုးရလေလံကြေးမဟုတ်ပဲ တခြားကုန်ကျတဲ့စရိတ် (ဆိုင်ရာပိုင်ရာတွေကိုကျွေးမွေးရ၊ ပေးကမ်းရတဲ့စရိတ်) တွေကလည်း နည်းမှမနည်းတာ။
ဇေကမ္ဘာကုမ္ပဏီက ဒေါက်တာခင်ရွှေလို လူသိများထင်ရှားတဲ့ စီးပွားရေးသမားကြီးကတော့ ဝန်ကြီးရဲ့အစီအစဉ်ကို အချက်အလက်တွေနဲ့ ကန့်ကွက်ငြင်းဆန်ခဲ့ပါတယ်။ လမ်းကြေးကောက်ခံခွင့်ရထားတဲ့သူတွေ အားလုံးဟာ အမြတ်ရချင်လို့ လုပ်တာ၊ ဒီလိုအမြတ်လိုချင်လို့ စီးပွားရေးတစ်ရပ်အနေနဲ့လုပ်တဲ့နေရာမှာ တစ်ချို့သောသူတွေဟာ မီတာနဲ့ငွေကိုယူထားရတာတွေရှိပါတယ်။ သူတို့တစ်တွေအတွက် အမြတ်မရဘူးဆိုရင် ဘာလို့ဆက်ပြီး လုပ်ကိုင်တော့မှာလဲ။ ဒီအတွက် လေလံကြေးပေးထားရတဲ့ ငွေကြေးတွေကို ပြန်အမ်းပြီး အစိုးရက ပြည်သူတွေသက်သာအောင် ဆောင်ရွက်ပေးသင့်တယ်လို့ တင်ပြခဲ့တယ် ဆိုပါတယ်။ နောက်တစ်ခါ စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီက ခေတ်မီတဲ့ဌာနဖြစ်ပြီး ဆောက်လုပ်ရေးဌာနကတော့ ခေတ်နောက်ပြန်တဲ့ဌာနဖြစ်တယ်လို့ တီးထိုးဝေဖန်တဲ့သူတွေလည်း အတော်များပါတယ်။ မိုင်သုံး လေးဆယ် ကို ၂၀၀-၃၀ဝ ကျပ် (ကားလေး) ကောက်ခံတာဟာ စည်ပင်သာယာက မြို့ဝင်ကြေး ၂၀၀-၃၀ဝ ကျပ် ကောက်ခံနေတာနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ရင် များတယ်လို့ဆိုနိုင်သလားပေါ့။ (တစ်ချို့မြို့တွေဆို ၅၀ဝ ကျပ် လောက်အထိ ခပ်တည်တည်နဲ့ ကောက်ခံနေပါတယ်)။ နောက်တစ်ခါ ရန်ကုန်၊ မန္တလေး တို့အပြင် အချို့မြို့တွေမှာ ယဉ်ရပ်နားခကောက်ခံနေတဲ့ ၃၀ဝ ကျပ် ကောက်ခံနေတဲ့ ရပ်နားခွန်နှုန်းထားထက် ပိုဆိုးပါသလားလို့ မေးခွန်းထုတ်ခဲ့ကြပါသေးတယ်။
အစည်းအဝေးမှာ တက်ရောက်လာကြတဲ့သူတွေဘက်က ၂ယောက် ၃ ယောက်လောက်သာ ပြန်လှန်မေးခွန်းထုတ်၊ မကြေနပ်တာ ပြောကြပြီး အများစုကတော့ ဘာမှ မပြောကြပါဘူး။ အဲဒီအစည်းအဝေးဟာ ပြတ်သားတဲ့အဖြေမထုတ်နိုင်ပဲ၊ ဆုံးဖြတ်ချက် မချနိုင်သေးပဲ ပြီးစီးခဲ့တယ်လို့ အစည်းအဝေးတက်ရောက်ခဲ့ကြတဲ့သူတွေက ပြောနေကြပါတယ်။ လမ်းကြေး ချပေးယုံနဲ့ ကုန်ဈေးနှုန်း တကယ်ကျသွားမှာလားလို့ လမ်းကြေးကောက်ခံခွင့်ရတဲ့သူတွေက သိချင်နေကြတယ် ဆိုပဲ။
လမ်း ၊ တံတား ဖြတ်သန်းခ ကောက်ခံနေတဲ့ လုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့ ကိုက်၊ မကိုက် ဆိုတာ ဘယ်လို တွက်ပြီးပြောလဲမသိပါ။ လမ်း ၊ တံတား တည်ဆောက် ပြုပြင်မှု လုပ်ငန်းတွေမှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဟာ long term investment ပါ။ သိသလောက်တော့ BOT စနစ်နဲ့ လုပ်ခွင့်ရနေတဲ့ ကုမ္ပဏီတွေရဲ့ toll ဂိတ် တဂိတ်ဟာ တလကို လမ်းအသုံးပြုခ၊ မြိုဝင်ကြေး၊ တံတားဖြတ်သန်းခ စုစုပေါင်း သိန်း (၁၀၀) ကျော် (၂၀၀) ရနေပါတယ်။ လုပ်ကိုင်ခွင့်ရတဲ့ ဂိတ် များရင် များသလောက် တလတလ မနည်းပါဘူး။ နှစ် (၃၀) ကြာရင်တော့ အစိုးရကို ပြန်လည်အပ်နှံရပါမယ်။ ဘာကို မကိုက်ဘူးလို့ ဦးခင်ရွှေက ပြောပါလိမ့်။ တနှစ်တနှစ် billion နဲ့ချီ မမြတ်မှာကို တွက်ပြီးပြောတာလားတော့ မသိပါ။
ကျနော်ပြောတာ မရှင်းလို့ထင်ပါတယ် …. အခုအစည်းအဝေးမှာ တစ်မိုင်ကိုသက်မှတ်လိုက်တဲ့နှုန်းထားနဲ့ဆိုရင် မကိုက်ဘူးလို့ ဆိုလိုတာပါ….
လက်ရှိကောက်နေတဲ့၊ အရင်ကောက်နေတဲ့နှုန်းအရတော့ ကန်ထရိုက်တွေ ငွေတွေသဲ့ယူနေကြတာ ဟုတ်ပါတယ်…
တနှစ်တနှစ် billion နဲ့ချီ မမြတ်မှာကို တွက်ပြီးပြောတာလားတော့ ကျနော်လည်း သေချာမသိကြောင်းပါ ….
လမ်းတံတား ဖြတ်သန်းခ ကောက်ခံတဲ့လုပ်ငန်းဆိုတာ တစ်နှစ်တစ်ခါ ကန်ထရိုက်စနစ်ဖြင့် လေလံယူရပါတယ်။ လေလံဈေးကြီးခြင်းနှင့် လေလံရအောင် တရားမဝင်လာဘ်ထိုးရခြင်းများရှိပါတယ်။ ကောက်ခံတဲ့အခါမှာလည်း သတ်မှတ်နှုန်းထက် ပိုကောက်ခံလို့မရပါဘူး။ ပေးရသူတွေအမြင်မှာ များတယ်လို့ ထင်ရပေမယ့် တကယ်တမ်းရတဲ့သူတွေက မကိုက်တာအမှန်ပါ … တစ်နှစ်စာအတွက် သတ်မှတ်ပြီးသားနှုန်းတားအတိုင်းကောက်ခံလျှင်တောင်မှ အရင်းကြေရုံရှိသည့်အလုပ်ကို လျော့ကောက်ခိုင်းလျှင်တော့ တကယ်ရှုံးမှာ သေချာပါတယ် …
မကိုက်တာကို ဘာလို့လုပ်နေတာလဲလို့ မေးစရာရှိပါတယ် … သိပ်ချမ်းသာတဲ့သူဌေးတွေက ပိုက်ဆံထားစရာမရှိလို့ အလုပ်ရှိအောင် လုပ်ကြတယ် … ငွေဖြူပြပြီးသားလဲဖြစ်တယ် …
ကျနော် ရေးဖို့ ကျန်သွားတာပါ… အစိုးရသစ်က ကောက်ခံဖို့ ညွှန်ကြားတဲ့နှုန်းက တစ်မိုင်ကို ပြားခြောက်ဆယ်လို့ ဆိုပါတယ်….
တစ်မိုင် ပြားခြောက်ဆယ်… မိုင် နှစ်ဆယ် ဆယ့်နှစ်ကျပ် ပဲ ကောက်တော့လို့ ဆိုတယ်တဲ့… အခု လက်ရှိကောက်နေတာက ၃၀ဝ ကျပ် ဆိုတော့ အဆ ၃ဝ လောက် ဝင်ငွေ လျော့သွားမှာလေ…. အဲဒီတော့ ကန်ထရိုက်တွေ တီဆားနဲ့တွန့်သလို ဖြစ်သွားတာပေါ့
အစိုးရမှာ.. ပိုက်ဆံရှိလာပြီဆိုရင်တော့.. အကုန်အစိုးရကပြန်သိမ်းပြိး..(လျှော်ပေးပြီး) ဖရီးဝေးတွေလုပ်သင့်ပါတယ်..။
လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးလို..အင်ဖရာစရပ်ချာတွေအတွက်..အစိုးရမှာ အဓိကတာဝန်ရှိတာမို ့ပါ..။
ကောက်ပ ကောက်ပ သုံးပေတစ်ဂိတ် နှုန်းနဲ့။ ဂီယာ နံပါတ် ၅ ထိုးပြီး လီဗာလေးပေါ် ခြေထောက်မှေး မတင်ရသေးဘူး။ ဘရိတ်အုပ်၊ ရပ်၊ ပေးစမ်းတဂိတ်။ လမ်းကတော့ သူလို ငါလိုပဲ။ ကား ၂စီး မျက်နှာခြင်းဆိုင်တွေ့ရင် တစီး လမ်းဘေးချပေးရတဲ့ လမ်းမျိုးလဲ ကောက်တာပဲ။ ကီလို ၃ဝ ၄ဝ လောက်ပဲ မောင်းလို့ရတဲ့ လမ်းလဲ ကောက်တာပဲ။ လမ်းပေါက်ရင် ဘာလုပ်လဲ၊ လမ်းအပေါက်ထဲကို မြေကြီး၊ ကျောက်စရစ်၊ သဲ ရောပြီး ဖို့လိုက်တာပဲ။
ကားဈေးတွေကလည်း တစ်ကယ်တမ်းတော့ လိုင်စင်က ဈေးကြီးတယ်…
ကားဝယ်ထားတာ အရင်းကျေအောင်လည်းရှာရတော့ ကုန်လည်း လျှော့တင်ရတော့ ဈေးတွေတက်ကုန်တာပေါ့…
ကျုပ်တို့လည်း.. ဘာလုပ်လုပ် အကုန်အကျကိုများပါတယ်…
ဖုန်းဆက်တာလည်း… တစ်မိနစ်ကို (၅၀)ပေးရ…. ဖုန်းဝယ်တော့လည်း…ဒီကဒ်လေးကို နံပါတ်လေးကို (၅)သိန်းပေးလိုပေးရ….. ပြီးတော့ ခုဆို CDMA တွေလည်း မြန်မာပြည်ဖုန်းပီသလာပြီး လိုင်းBusy ဖြစ်တာ များနေပြီ..ခေါ်ရလည်း ခက်တတ်နေပြီ….
ကားဝယ်တော့လည်း ဈေးကြီး.. လိုင်စင်လုပ်တော့လည်း ဈေးကြီး…
လမ်းပေါ်တက်မောင်းတော့လည်း ဈေးကြီး….. စက်သုံးဆီကလည်း ဈေးကြီး…..
ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်ထုတ်ရောင်းတော့… ဈေးကမရဘူးဖြစ်နေတယ်ဗျာ…..ကဲ….
ဈေးတော့ကြီးတယ်.. လမ်းက တစ်ကယ်မကောင်းဘူး.. ဈေးတော့ကြီးတယ်.. လိုင်းက တစ်ကယ်မကောင်းဘူး….
လမ်း တွေကော ဖုန်းလိုင်းတွေကော… မကိုက်ကြတာလား…. ကိုက်ကြတာလား….မသိဘူး..
သုံးတဲ့သူတွေ မကိုက်တာတော့ အသေအချာပဲ….
တံတားကြေး လမ်းကြေးပေးပြီး မောင်းမယ် မကြံသေးဘူး တဲစုပ်လေးထဲက အတင်းထွက်လာပြီး လမ်းပေါ် တက်တားတယ် ဘာတဲ့… ဘီးခွန်.. မြို့ဝင်ကြေး..
ဪ ဆူးမမ ရယ် ဒါကြောင့်ပြောတာပေါ့ ၃ပေ ၁ဂိတ်ပါလို့ ဆိုနေ။ ပိုက်ဆံသာ ကောက်နေလိုက်ကြတာ ဝန်ဆောင်မှုကတော့ စုတ်ပြတ်သတ်နေတာပဲ။
လမ်းကြေးကောက်တဲ့သူတွေက စည်ပင်သာယာက ဘီးလိမ့်ခွန်ကောက်တာကို အတော် အားကျနေတယ်ဗျ…
လမ်း မပြုချင်တာချင်းအတူတူ စည်ပင်သာယာကို တိုင်မယ့်သူ မရှိလို့တဲ့လေ…
toll gate မှာ လမ်းကြေး၊ ဘီးကြေးတဲ့ နှစ်မျိုးကောက်တယ်။ sign board မှာ ရေးထားတာ ၂တန်အောက် ၂၀ဝတဲ့။ ယူတော့ ၄၀၀။ ဘာဖြစ်လို့လဲ မေးတော့ ဘောင်ချာမှာပါတယ်တဲ့။ ဖတ်ကြည့်တော့ Road tax 200, Wheel tax 160 တဲ့။ တစ်နှစ်တစ်ခါ ကားလိုင်စင်လုပ်တိုင်း ပေးရတဲ့ Wheel tax က ဘာအတွက်လည်း မသိဘူး။ ဖြစ်နိုင်ရင် သဂျီးပြောသလို ဖရီးဝေး မဖြစ်ရင်တောင် ကားလိုင်စင်ထုတ်ပေးထဲက တန်သလောက် အခွန်ကောက်ပြီး ဂိတ်တွေဖြုတ်ပေးရင် ကောင်းမယ်။ နို့မို့ဆို ဂိတ်ကြေးတွေ ပေးပေးနေရတာနဲ့တင် ခရီးဖင့်တယ်။ ( လမ်းတွေက မကောင်းတာလည်း ပါတာပေါ့)
nature ရေ… မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကောက်ခံတဲ့ လမ်းကြေးတွေက များတယ်လို့ မထင်ပါဘူး…
မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ ရတဲ့ ဝင်ငွေကိုပဲ နည်းတယ်လို့ ထင်တာပါ….